तपाईं स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् ! - सुदूरखबर डटकम
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder July, 28 2018
काठमाडौं, साउन १२ । तपाईं स्मार्ट फोन किन्दै हुनुहुन्छ ? स्मार्ट फोन किन्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् । नयाँ स्मार्ट फोन किन्दा विशेषगरी स्क्रिन तथा डिस्पे (रिजोलुसन), ब्याट्री, प्रोसेसर, र्‍याम, स्क्रिन क्वालिटीलगायतका विषयमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अलि चलेको कम्पनी रोज्नुपर्छ, ताकि फोनमा समस्या आएमा ग्राहक सेवा तुरुन्त पाइयोस् ।
स्मार्ट फोन किन्दा स्क्रिन रिजोलुसनमा ध्यान दिनुहोस् । बजारमा उच्च गुणस्तर 720×1280 HDƒ1920×1080 Full HD रिजोलुसनसम्मका स्मार्ट फोन उपलब्ध छन् । स्क्रिन रिजोलुसन छान्दा HVGA– 480×320, VGA– 640×480, FWVGA– 854×480 जस्ता रिजोलुसन राम्रो मानिन्छन् । महँगो फोन किन्न चाहनुहुन्छ छ भने फुल एचडी (1920×1080 Full HD)पिक्सल फोन लिनुहोस् । स्क्रिनको साइज रोज्दा मिडियम साइजमा किन्नु राम्रो हुन्छ ।
मोबाइल किन्दा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसमा रहेको वारेन्टी, ग्यारेन्टी हो । कम्तीमा पनि एक वर्ष सेटमा र छ महिना ब्याट्री र एसेसरिजमा वारेन्टी, ग्यारेन्टी भएको मोबाइल सेट किन्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस्, वास्तुशास्त्रका यी ८ उपाय
तपाई आफूलाई कत्तीको भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ ? भाग्यमानीले मात्र दर्शन गर्ने गर्छन यस्ता अचम्मैका शंखहरु, तपाई पनि फेसबुकबाटै दर्शन गरी शेयर गर्नुहोस
माघेसंक्रान्तीको अबसरलाई जिवन्त पार्न भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता गल्तीहरु, हैन भने धर्मी महिनामा पापको भारी बोक्नु पर्नेछ
धर्मशास्त्र र बेदग्रन्धमा यौन सम्बन्धबारे यस्ता रोचक कुरा भनिएको छ